Tamang Samaj|Tamang|Tamang News|Portal – तम्बा नै तामाङ संस्कृतिको निर्माता:
तम्बा नै तामाङ संस्कृतिको निर्माता:
Sep 02, 2016 admin Articles, Local News
उहिल्यै पृथ्वीको उत्पत्ति भएछ । त्यसपछि भगवानको पनि उत्पत्ति भएछ । भगवानले आफ्नो सेवा र पूजा गर्नसक्ने प्राणीको आवश्यकता महसुस गर्नु भएछ । सोही क्रममा फक्मा च्याङ्रेसी (अवलोकितेश्वर) ओडारमा गएर तपश्यामा लीन हुनुभएछ । तत्पश्चात उहाँले एक बाँदर र एक वनदेवीको सृष्टि गर्नु भएछ ।
त्यसरी जन्माइएकी वनदेवीलाई फाक्मा च्याङ्रेसीको पूजाको लागि पानी र फूल टिपेर ल्याउने काम दिनुभएछ । वनदेवी सँधै पानी र फूल ल्याएर फक्मा च्याङ्रेसीलाई दिन्थिन् । केही समयपछि फूल र पानी ल्याउन ढिलो गर्न थालिछन् । फक्मा च्याङ्रेसीले ढिलो हुनुको कारण वनदेवीलाई सोध्नु भएछ । एउटा बाँदरले फूल टिप्न जाँदा झारी दिने र पानी पनि धमिलो पारी दुःख दिने गरेको गुनासो सुनाइछन् । त्यसपछि त्यो बाँदर र वनदेवीको बीच फक्मा च्याङ्रेसीले विवाह गराइदिनु भएछ ।
त्यसपछि चारै दिशा र पृथ्वीको माझमा गरी जम्मा पाँच देवताको सृष्टि भएछन् । देवताहरूको सृष्टिपछि मानिसको पनि सृष्टि भएछ । मानिसले नै देवदेवी, अन्तरिक्षको शिकारी, शेषनाग र देवी देउराली समेतलाई पूज्न थालेछन् ।
तम्बाको उत्पत्ति :
उँभो भोटमा ‘ल ग्यल्बो दर्सिङ’ र ‘म्हि मनि ग्यल्बो’ रहेछन् । ती दुवैका छोराछोरी पनि भएछन् । समयसँगै ती छोराछोरीहरू पनि विवाहयोग्य हुने नै भए । त्यसपछि ‘ल ग्यल्बो दर्सिङ र म्हि मनि ग्यल्बो’का छोराछोरीबीच विवाह गरिदिने सहमति भएछ । विवाहको क्रममा ‘तम्बा’को खोजी भएछ ।
सोही बेला तम्बाले विवाहको रीतिथिति निर्माण गरिदिएछन् । मृत्यु संस्कारको पनि नीति निर्माण गराइदिएछन् । तम्बाले नै जीवित मान्छेको नाममा जिन्सेक र मृतकको नाममा ह्रोसेक गर्ने गराउने क्रम पनि बनाइदिएछन् । भनिन्छ; पृथ्वी प्रलय भएछ भने पनि पछिल्लो समय पुनः अहिलेको जस्तै भएर मानवको वंश फर्किएर आवस् भन्ने मनसायपूर्वक त्यस्तो रिमठिम बाँधिदिएको थियो ।
त्यसैले हरेक सांस्कृतिक कार्यमा तम्बाको उपस्थिति अनिवार्य भएको मानिन्छ । तम्बा बिना कुनै पनि कार्य अधूरो हुने जनविश्वास अभैm कायम छ । विशेष गरी विवाहमा तम्बाको उपस्थिति अनिवार्य मानिन्छ । त्यसैले तम्बालाई थोङ्सेसहित रक्सीको सगुन राखेर विवाहमा उपस्थितिको निमित्त अनुरोध गर्ने प्रचलन कायम रहेको छ ।
तामाङ समाजमा लामा, बोम्बो र तम्बालाई प्रमुख मानिन्छ । यी तीन बिना तामाङ समाज चल्न गाह्रो छ । पछिल्लो समयमा लामाले बोम्बो र तम्बाको भूमिकामाथि हस्तक्षेप गर्न थालेका पाइन्छन् । यस्तो हुनु स्वाभाविक नहोला किनकी लामाले गर्ने रीतिरिवाज लामासँगै, बोम्बोले गर्ने रीतिरिवाज बोम्बोसँगै र तम्बाले गर्ने रीतिरिवाज तम्बासितै हुन्छ ।
न्वारान (नामाकरण)मा तम्बाको भूमिका :
छोराछोरी वा नाती नातिनी जन्मेका बखत तम्बालाई बोलाएमा तम्बाले पनि न्वारानमा आफ्नो विधि पु¥याउने गर्दछन् । त्यसको लागि तम्बालाई सगुन राखी बोलाउनु पर्दछ । न्वारानमा तम्बाले नवजात शिशुलाई छेपामे (आयुत्तरबुद्ध)को कु (मूर्ति) राखेर आशिरवाद दिने गर्दछन् । आशिरवाद गीतमार्पmत् बोल्ने गर्दछन्; जस्तै ः–
ओम मणी पद्मे हुँ !
छेपामेला मोलमसे ।
चु होई फलाना (शिशुको नाम भन्ने)ला
गन्दी ह्रेङ्ह्रेङ छेऽ ह्रेङ्गै ।
ग्यलम् ह्रेङ्ह्रेङ् छेऽ ह्रेङ्गै ।
माली मेला मे ह्रेङ्गै ।
चारखम्नाला के ह्रेङ्गै ।
झ्याङ्छुप दोङह्रङ तप तगै
डहू दोङ ह्रङ् तप तगै ।
ङ्हेमाला ह्रङ्बा तप तगै ।
धावाला ह्रङ्बा तप तगै ।
सेमरी मन्बा दोनडुप्गै …
छोरीलाई स्ह्यामा दिने :
तामाङ समाजमा छोरीलाई स्ह्यामा अर्थात् न्हम्सा (पहिलो पटक चोली, पटुकी र फरिया÷साडी) दिने प्रचलन रहेको छ । यसको पनि तम्बा गीत रहेको छ । त्यसबखत तम्बाले गीतमार्पmत्– ‘मदेशको कपास यङ्दामा कातेर धागो बनाएर, तान लगाएर, थाक्रो च्युङ्नी कङ्गै च्युङ्नी लगाएर अनि बुट्टा भरेर देवी आमाले बुनेकी कपडा तिमीलाई दियौं । चीनमा पाइने उच्च कोटीको तासको कपडा लगाउन पाओस् । यो कपडा तिम्रो लागि फलिफाप होस् । सदा राम्रो र शुभ रहोस्’ भन्ने व्यहोरासहितको आशिरवाद दिने गर्दछन् ।
विहेमा तम्बाको अपरिहार्यता रहन्छ । त्यसैले तम्बालाई सगुन राखेरै निम्तो दिने गर्दछन् । सगुन स्वीकार गरेपछि तम्बा विहेको अघिल्लो दिन बेलुकी केटा(दुलाह)को घरमा पुग्छन् । सोही बेलुकी खाना खाइसकेपछि– छ्याङ्देमा बुम्बा र सगुन राख्न लगाएर तम्बाले सङसेर्गेमको गीत गाउने गर्दछन् ।
त्यसबखत तम्बाले गीतमार्फत्– गाउँको देवी देवता, देउराली, सिमेभूमे, अन्तरिक्षको चनलाई, आकाशको घाम–जून, पातालको नागनागिनी, चारै दिशा र माझ पृथ्वीको सबै देवी देवता र घरको कुलदेवतालाई कुन सङ चढाउने भन्ने हुन्छ । यो गीत जथाभावी गाउँदा गाउनेलाई बज्य्र्रा आउने गर्दछ । त्यसैले विवाहको मेलोमा मात्र गाउँदा राम्रो हुन्छ । गीत ‘साङो साङो …’ बोलबाट शुरू गर्दछन् ।
बेहुलालाई फेटा बाँध्ने र सजाउने :
बेहुला सजाउने क्रममा फेटा बान्ने प्रचलन रहेको छ । फेटा मामाले बाँधिदिनु पर्दछ । त्यसको लागि मामालाई सगुन राखी अनुरोध गर्नु पर्दछ । सोही क्रममा तम्बाले गीत मार्फत् फेटाको वर्णन गर्दछन् । वर्णनको क्रममा– ‘म्हेन्दो कुसुमले सुनको वा पयूँको चर्खा बनाएर अनि तान लगाएर बुन्नुभएको हो । तासको चीनको कपडा, घाम र सुनकी देवीजस्तै देखिने अनि मजुरको भालेजस्तो देखिने बेहुलाको शिरमा यो फेटा मामाले बाँधिदिनुहोस्’ भनेर तम्बाले ठू गरी दिएपछि मामाले बाँधी दिने गर्दछन् ।
बेहुलीको घर लाग्ने :
त्यसपछि बेहुलाको घरबाट बेहुलीको घर जाने क्रम शुरू हुन्छ । जन्ती हिँड्ने हिँडाउने वरियता क्रमअनुसार हुन्छ । नौमति बाजा भएमा सबैभन्दा अगाडि लगाउने गर्दछन् । त्यसपछि बेहुला, मण्डेउली, लोकन्थी र त्यसपछि बर्जा बोकेर तम्बा हिँड्ने गर्दछन् । तम्बाभन्दा पछाडि बन्दुकेहरू पनि हुन्छन् । त्यसबखत तम्बाले आफ्नो कुल देवतालाई नै आह्वान गर्दै तम्बा गीत गाउने गर्दछन् ।
बाटो पार गर्ने क्रममा :
जन्ती बेहुलीको घर जानेक्रममा– बेहुलाले खोलामा पुग्दा रातो र सेतो धजा अनि एक पैसा छ्युलमो (जलदेवी)लाई चढाउनु पर्दछ । नेऽदा (देउराली) र बाटोमा पर्ने मन्दिरहरूमा पनि फूलपाती र भेटी चढाउने प्रचलन रहेको छ । बेहुली कहाँ पुगेपछि तम्बाले आफ्नो बर्जा बेहुलीको आँगनको उचित स्थानमा गाड्ने गर्दछन् । त्यसलाई कसैले उखेल्न पाइन्न । बर्जाको सुरक्षार्थ तम्बा नसुतेरै बस्नु पर्दछ । केही गरी तम्बा सुतेमा कुनै बद्मासले उखेलेर लुकाउन पनि सक्छन् । त्यसरी बर्जा हराएमा तम्बालाई डाँट्छन् ।
माइती पक्षको तम्बाद्वारा सोधनी :
बेहुलासहित् जन्ती बेहुलीको आँगनमा पुगेपछि माइती पक्षीय तम्बाले बेहुला पक्षीय तम्बालाई गीतमार्फत् सोध्ने गर्दछन् । सोहीक्रममा, ‘तपाईँ कसरी आउनु भयो ? बाटोमा त यस्ता–यस्ता स्थान र शक्तिहरू थिए । कसरी पार गर्नुभयो भनेर सोध्ने गर्दछन् । त्यसको पनि केटा पक्षीय तम्बाले उत्तर दिनु पर्दछ ।
ढोका खोल्ने जन्ती बेहुलीको आँगनमा पुगेको बखत ढोका हल्का खुलेको हुन्छ । त्यसपछि दुवैपक्षको तम्बा बस्ने र माइतीको तम्बाले यस्तो स्थानमा यस्तो बार थियो । कसरी आयौ भनेर सोध्छन् । त्यसको उत्तर दिएपछि अलिक बढी खुल्छ । त्यसरी प्रश्नहरूको उत्तरसँगै ढोका खोलिँदै जान्छ र अन्त्यमा पूरै ढोका खुलेपछि मात्र घरभित्र प्रवेशको क्रम चल्छ । यदि केटा पक्षले उत्तर दिन नसकेमा; मैले सकिँन भनी सगुन राखेर माफी माग्नु पर्दछ ।
डाङ बुझाउने :
त्यसरी ढोका खुलेपछि लगिएको रीत अर्थात् सगुन वा डाङहरू बुझाउने गर्दछन् । डाङ बुझाउने क्रममा लमीको भूमिका हुन्छ । डाङ बुझाएपछि पहिले बेहुलालाई प्रवेश गराउनु पर्छ । त्यसपछि मात्रै क्रमैसँगै घरमा पस्नु पर्दछ किनकी बेहुलाभन्दा अघि अरू नै व्यक्ति प्रवेश गरेमा डाँट्छन् । को कसरी प्रवेश गर्ने भन्ने व्यवस्था मिलाउने काम तम्बाको हुन्छ ।
बेहुला चिनाउने र ढोगभेट :
बेहुलीको घरमा प्रवेश गरेपछि ढोगभेट चल्छ । केटी पक्षको सबैलाई उपस्थित भयो भनेपछि बेहुला चिनाउने क्रम तम्बाले नै गर्दछन् ।
चारदाममा तम्बाको ठूलो भूमिका रहन्छ । चारदामपछि टीकाटालो चल्छ । सोक्रममा ह्रुईबा प्रात्पा गर्दछन् । सोही क्रममा– माइतीले हाम्री छोरी सबै भद्रभलाद्मी, गौरीशङ्कर, नदीनाला, माछा, लेकको पहा, मलसाँप्रो, बिरालो, घोरल, मिर्ग, चराचुरुङ्गी, बाघ, गाउँको देवी देउराली र कुल देवताले सुन्यो । बर्जा, तरबार, खुँडा, धर्तीमाता, बत्ती, आकाशको जून र घाम, नौलाखे तारा, अन्तरिक्षको शिकारी र पातालको नागनागिनी सबै साक्षी राखेर मासु, रगत, रूप र सीप जिम्मा दियौं तर हड्डी चाहिँ माइतीकै जिम्मामा छ है । सबैले सुन्यौं कि सुनेनौं भनी सोध्छन् । सबैले सुन्यौं भने पछि चारदाम हुने गर्दछ ।
बेहुली जिम्मा लिएर बेहुलाको घर फर्कने ः
चारदाम सकिएपछि खानापिन चल्छ । त्यसपछि बेहुली लिएर बेहुलाको घर फर्कने क्रम चल्छ । फर्कने बाटोमा गेटको निर्माण गरिएको हुन्छ । त्यस्ता गेटमा विदाइको सगुन राखिएका हुन्छन् । टीकाटालो गरेर त्यहाँबाट पनि अघि बढ्नु पर्छ । त्यसक्रममा माइतीको तम्बाले गीतैबाट बेहुलापक्षको तम्बालाई बेहुली जिम्मा लगाउने गर्दछन् । हाम्री चेलीलाई बाटोमा केही होला । त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ भनेर भन्ने गर्दछन् ।
बेहुलीलाई घरमा प्रवेश गराउने साथै बेहुलाको घरमा जिम्मा लगाउने :
त्यसपछि बेहुलाका घरमा प्रवेश गर्नुअघि गेटमा सगुन राख्ने गर्दछन् । त्यो सगुन छ्योत गरी बेहुला बेहुलीलाई घरमा प्रवेश गराउने काम तम्बाकै हुन्छ । बेहुली सोही दिन वा भोलिपल्ट हुल्ने भन्ने पनि ठाउँ विशेष फरक ठिम पाइन्छन् । बेहुलीलाई घरमा हुल्ने क्रममा, तम्बाले बेहुली आफूले जिम्मा लिएर ल्याएको हुनाले अर्काकी छोरी ल्याइदिएका छौं । राम्रोसँग राख्नु । भोलि तलमाथि केही भएमा अप्ठेरो पर्ला नि भन्दै जिम्मा लगाउने गर्दछन् ।
बेहुलाको फेटा खोल्ने :
बेहुला सजाएर बेहुलीको घर लाग्ने क्रममा मामाले बेहुलालाई फेटा बाँधिदिएको हुन्छ । सो फेटा बेहुलीको घरमा हुलेको भोलिपल्ट मामाद्वारा नै विधिपूर्वक खोल्ने प्रचलन छ । त्यसक्रममा ‘मामालाई कस्तो भयो ? दुःख दियौं । कुनै चित्त दुखाई पो प¥यो कि भनेर सोध्छन् । त्यस्तो दुःख केही छैन भनी मामाले पनि भनेपछि मामालाई डाङ दिने गर्दछन् । डाङ प्राप्त भएपछि मामाले पनि ‘अलिपर लगेर खान्छु पनि भन्छन् ।’ त्यसो भनेपछि, मामा ! यस डाङमा बीख हालिदियो भन्ने शङ्का लाग्यो कि के हो ? हैन भने यथास्थानमै सगुन स्वीकार गर्नुहोस् भनि अनुरोध गर्दछन् । यसपछि भने मामाले सगुन चलाउनछन् ।
बेहुला बेहुलीलाई अशिरवाद : त्यसपछि तम्बाले बेहुला र बेहुलीलाई आशिरवाद दिने गर्दछन् । आशिरवाद गीतैबाट दिने प्रचलन रहेको छ । त्यसपछि तम्बाले आफ्नो विधि अनुरूप डम्फू थन्क्याउने गर्दछन् ।
मानिस मरणशील प्राणी हो । त्यसैले मृत्यु निश्चित छ । तामाङ समाजमा मृत्युपछि घेवा अपरिहार्य मानिन्छ । विवाहिता महिलाको भने घेवाको क्रममा अस्तु (ह्रुईबा) माइतीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ किनकी चारदाम गर्दा तम्बाद्वारा ह्रुइबा प्रात्पा गरिएको हुन्छ । त्यस्ती चेलीको ह्रुईबा माइतीले स्वीकार गर्दछन् । अनि तमसुक भए पो बाकसमा राख्नु, पैसा भए पो चलाउनु, सुनचाँदी भए पो गहना बनाएर लगाउनु । त्यसैले हाम्री चेलीको आत्मालाई शुखवती भवनमा पु¥याइदिनुहोस् भन्दै लामालाई सुम्पने गर्दछन् । त्यसपछि सो ह्रुईबालाई विधिपूर्वक विसर्जन गराउने प्रचलन रहेको छ ।
(तम्बा गडुलसिं पाख्रिन झ्याँकु गा.वि.स. वडा नं. ९ थलखर्क, दोलखा निवासी तम्बा हुनुहुन्छ । उहाँ बुबा भक्तसिं पाख्रिन र आमा ठूलीकान्छी ढोल्मोको छोरो हुनुहुन्छ । तीन छोरा र चार छोरीका बुबा पाख्रिन २०२८ सालदेखि स्काभेटर चलाउँदै आउनु भएको छ ।
वि.सं. २०३१ सालदेखि उहाँले तम्बाको भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ । पाख्रिनले वि.सं. २०२८ सालमै आफैँले खुकुरीद्वारा ताछेर घेरा बनाई डम्फू बनाउनु भएको थियो । उक्त डम्फू अभैmसम्म सुरक्षित राख्नुभएको छ । यो लेख, ‘तम्बा नै तामाङ संस्कृतिको निर्माता हो’ भन्ने मान्यतामा अडिक पाख्रिनसित गरिएको कुराकानीमा आधारित रहेको छ ।)
फौदसिं पाख्रिनको नाती ।
छोरा तीन भाइ र चार छोरी छन् ।
२०२८ सालदेखि स्काभेटर चलाउन थालेको कन्काई सिँचाई योजना झापा । जापानद्वारा आयोजित प्रोजेक्टमा । अहिले काम भेट्दाखेरि स्काभेटर चलाउने गरेको । अहिले पनि २२ वर्षको जस्तो जोश छ । शुरूमा हिटाची भन्ने जापानी मेसिन आएको थियो । तीन वटा मेसिन आएकोमा चलाउनको लागि दुई दुई गरी जम्मा ६ जनालाई सिकाए । सिकाउनको लागि जापानबाटै एकजना आएका थिए । स्काभेटर चलाउने अपरेटर हुनुअघि नौ महिनासम्म त मेकानिक हेल्पर पनि गरेको ।
सेवा गरे पो मेवा पाक्छ भन्नुहुन्थ्यो आमाले; हो नै रहेछ । ठूलो छोरी ज्वाईँलाई पनि आपैmँले सिकाएर स्काभेटर अपरेटर बनाएको छ ।
हिँड्दा–हिँड्दै र हेर्दा–हेर्दै तम्बा बनेको हुँ । गाउँघरमा जानेको देखेको र अन्यत्र पनि देखेपछि तम्बा भएँ । अहिले चासो राख्नेहरूलाई तम्बासम्बन्धी बताउँदै आएको छु । २०३१ सालदेखि तम्बा गर्न थालेँ । झापामा त्यतिखेर मेरा साथीहरू थिए । हामी पाँच जनाको टोली थियो । २०२८ सालमै मोडेको आपैmँले खुकुरी कोइरालाको काठ ताछेर बनाएको डम्फू छ । त्यो डम्फू मेरा शेखपछि तम्बा सङ्घ नेपालमा मेरो नाम लेखाएर राख्न लगाउने छु । त्यतिखेरको साथीहरूको नाम पनि बिर्सिसकियो । एक जना भने सिक्किमको पनि थियो ।
विहेमा तम्बाको लागि सगुन राखेर बोलाउँछन् । सगुनमा थोङ्से, रक्सी वा वियर लिएर आउने गर्दथे । विवाह मौसमा भने अहिले पनि निकै व्यस्त हुनुपर्ने हुन्छ । गाउँघरमै पनि बोलाउँछन् भने कहिले काहीँ झापासम्म पनि बोलाउँछन् ।
पहिलेको जस्तो तम्बा गर्ने चलन छैन । अहिले कतिले त अघि नै लामाले काम सकायो पनि भन्छन् । लामाले काम पूरा गरायो भने डम्फू बजाउने गरेको छैन । लामा र बोम्बोले तम्बाको भूमिका खोस्दैछन् भनेको सही हो । लामाले गर्ने रीतिरिवाज लामासँगै बोम्बोले गर्ने रीतिरिवाज बोम्बोसँगै र तम्बाले गर्ने रीतिरिवाज तम्बासितै छ ।
तम्बाले बुम्बा सिल्सी गर्ने र कसले, वmेको कहाँ बसेर बुनेको लुगा भन्ने स्पष्ट पारेपछि मात्र बेहुला र बेहुलीको पोशाक र गहना लगाइदिनु पर्ने हुन्छ । कतिपयले यो चलन पनि छाडिसकेको छ । तम्बालाई बोलाइसकेपछि पूरा रिमठिम गर्नु गराउनु पर्छ । विवाहको समयमा लामाले टासी, बोम्बोले रातभरि ढल बसेर बिहान सङसेर्गेम गर्छन्; त्यसैगरी तम्बाले पनि टासी (आशिरवाद) दिनुपर्ने हुन्छ । तम्बाले सङसेर्गेम गरी डम्फू बजाएपछि थन्क्याउने बेलामा बेहुला बेहुलीलाई टासी दिँदै नेऽदासिब्दा, देउ देउता, ल, लु र नाग–नागिनीहरूलाई पनि थन्क्याउनुपर्ने हुन्छ ।
मैले त छेपामेको कु पनि किनेर राखेको छु । कतिपय स्थानमा भने फाक्मा च्याङ्रेसीको कु नै राख्ने पनि गरेका देखिन्छन् । फाक्मा च्याङ्रेसीको कु भने मृत्यु कार्यमा मात्र राखिन्छन् ।
मेरा कुरा तलमाथि भएमा वा गल्ती भएमा क्षमा पाउँ । हामी सबैतिरको तम्बाहरू मिलेर तम्बा ठिममा एक रूपता कायम गराउनको लागि सहयोग गरौं ।
tweet प्रदेश नं. १ घेदुङले चरणबद्ध अन्दाेलनकाे घाेषणा: